SAWIRRO: Guddoomiye Cabdirashiid & Islaan Ciise oo ka shiray xiisada Boosaaso, & go’aankii Isimmada G. Bari – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Guddoomiye Cabdirashiid & Islaan Ciise oo ka shiray xiisada Boosaaso, & go’aankii Isimmada G. Bari
January 15, 2022 Xuseen 2
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, ayaa hoyga uu ka degan yahay caasimadda Puntland ee Garoowe ku booqday Islaan Ciise Islaan Maxamed.
Sida lagu sheegay qoraal uu baahiyay xafiiska warfaafinta Baarlamaanka Puntland, kulanka Guddoomiye Cabdirashiid iyo Islaan Ciise, ayaa la xariira xalinta shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland.
Islaan Ciise Islaan Maxamed, ayaa kamid ah isimmada marjaca ah ee deegaanada Puntland, waxaana si weyn looga hadal-hayaa deegaanka sababta uu uga gaabsaday ilaa hada xalinta xiisada Boosaaso oo salka ku haysa xil ka qaadistii Madaxweynaha Puntland uu ku sameeyay Agaasimihii Hay’adda PSF Maxamuud Cismaan Diyaano.
Isimmo iyo siyaasiyiin ay kamid yihiin Guddoomiye Cabdirashiid iyo Madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas iyo Cabdiraxmaan Faroole, ayaa kasoo laabtay Boosaaso, kaddib markii ay ku guuldareysteen xalinta xiisada PSF iyo dagaaladii ka dhacay Boosaaso.
Qaar kamid ah Isimmada gobalka Bari oo uu hoggaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse, oo ay qoys hoose ay yihiin Maxamuud Diyaano ayaa go’aan labaad oo ay habeen dhaweyd soo saareen kusoo jeediyay in Diyaano uu sii hoggaamiyo Hay’adda, taas oo ka careysiisay Isimmadii iyo siyaasiyiinta Boosaaso u tagay xalka.
Cadowga puntland dhulka inuu soo maro waa filaynnay laakiin cirka inuu ka soo dhacayo oo waliba boqortooyadii ku soodegayo lama filayn, diindiinkii la yiri war diinoow balaayaa kuutashsnaysay markaasuu yiri meeshii la iigu tashanayey sow alle ma joogin. Sidaa awgeed burhaan boqor muuse ilaahay waa ogaa markii loosoodhiibay middiyaha dhiigga leh iyo qoriga dabka ah ee uu puntland ku dhex walaaqayo lkn ceeb iyo fool xumo maanta burhaan boqor muuse ayeey agtaallaa wuuna ogyahay ineey puntland ka dabaalan doonto fidnada uu dhexdhigay.
mustafe maxamed axmed says:
xaaladu way iska dhamaan putland way taqanaa sida xal loogaro burhaana waa borkeeni danina waa uulu amri xaalku wuxuu u muuqda mid laxalin karo lkn aan helin ehelkii xalin lahaa arintu waa isku tuur tuur